Iindaba -I-Nokia isungule isahluli esibonakalayo sesahlulo esinye ukunceda ukuphucula yonke inkqubo ezenzekelayo kwiziko lokuhlela lase China
AbakwaNokia basungule isahluli esinye sesahluli esincedayo ukuphucula inkqubo yonke ezenzekelayo kwiziko lokuhlela lase China
• Isahluli esibonakalayo sesahlulo esinye sentengiso yaseTshayina
• Ukusetyenziswa kwendlela yokusebenza ezenzekelayo yetekhnoloji yokwahlula isiqwenga esinye ngokusekwe kwiinkqubo zombono wobukrelekrele (AI)
• Iimfuno zesithuba esincinci kunye nokudityaniswa ngokulula kwiinkqubo ezikhoyo
AbakwaNokia baphinde balwandisa uluhlu lwemveliso yabo yokuhlelwa kwephakheji yamaziko kunye nophuhliso lwesahlukanisi esibonwa ngokukodwa kwimarike yaseTshayina. Ukuvela kwayo kobuchwephesha kusekwe kwitekhnoloji yokubonwa kwesahluko esinye esiqinisekileyo sokubonisa.Lo mlinganiso mtsha wokubonwa kwesiqwenga esineemfuno zesithuba esincinci kwaye unokudityaniswa ngokuguqukayo kulwakhiwo lwenkqubo entsha kunye esele ikho.Kummandla ongaphantsi kwe-7 yeemitha zesikwere. Esi sisombululo sikrelekrele, sisebenza ngokuzenzekelayo, singahlula ukuya kuma-7,000 eephakeji ngeyure, ukongeza ngokukhawuleza nangokutyibilikayo imiqulu emikhulu yeephakeji ezinobungakanani obahlukeneyo, iimilo kunye nezinto zokupakisha, ezilungele amanyathelo alandelayo kwinkqubo yokuhlela. Isiphelo sesahlulo esinye se-Siemens sisetyenziswe ngokubanzi kwihlabathi, kwaye isihlukanisi saso esinye sesahlulo esinye sisetyenziswe ngempumelelo e-China.
"Ngokwahlulwa kwezinto ezihlangeneyo ezibonwayo, abathengi banokuzuza kulondolozo lwendawo kunye netekhnoloji efanelekileyo, utshilo u-Ye Qing, umphathi we-Nokia Logistics Automation Systems (Beijing) Co, Ltd." Ukwandisa imveliso ye-Nokia kunye nezisombululo ezinamandla lonyusa kakhulu inqanaba lokuzenzekelayo kweenkqubo, zinceda iinkampani zamalungiselelo ukuba zonyuse ukusebenza kwazo kwaye zonge iindleko. ”
Isihlukanisi sakwa-Nokia esizenzekelayo esisebenza ngokwahlula-hlula siphinda silungelelanise iipakethe zecala ngecala ukuya kuhambo oluqhubekayo lwesiqwenga esinye kunye nesithuba esimiselweyo Oku kuya kulungiselela iphakheji yamanyathelo alandelayo alandelayo anjengokuskena, ukulinganisa kunye nokuhlela. isahluli esibonakalayo sesahlulo esinye senkqubo yokujonga esekwe kwi-AI enokubona ngokuchanekileyo ubume, ubungakanani kunye nendawo yephakheji nganye. Olu lwazi ludluliswa ngexesha lokwenyani kwinkqubo yolawulo, emisela iparameter yokwahlulahlula into enye kwaye ilungelelanise Isantya sebhanti nganye ngokufanelekileyo Eyona njongo iphambili kukufezekisa ulawulo oluchanekileyo lwephakeji kwindawo encinci kunye nokuzahlula ngokupheleleyo isiqwenga esinye.
Ukongeza kwisahluli esihlangeneyo sesahluli esinye, isahluli sesahlulo esinye sesahlulo esinye siyafumaneka kulungelelwaniso ezimbini: iphakheji ebonakalayo isahluli esinye sesahluko iVisicon Polaris (yeephakeji ezinkulu nezisindayo) kunye nesahluli esincinci sesahlulo esinye seVisicon Capella (encinci kunye neephakheji ezilula).
I-Nokia Logistics Automation (Beijing) Co., Ltd. yinkxaso-mali ephethwe ngabakwa-Siemens Logistics e-China, ezinze e-Beijing. Ngamandla endawo, i-Nokia inokubonelela abathengi ngesisombululo semveliso kunye netekhnoloji, iinkonzo ezisemgangathweni kunye nokuphunyezwa kweprojekthi yasekhaya.
Ixesha lokuposa: Mar-12-2021